कसरी जन्मन्छन् जुम्ल्याहा बच्चा ? कसरी बस्छ, जुम्ल्याहा गर्भ ?
बिहिबार, साउन २८, २०७८ ८:३२
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। घरमा बच्चा जन्मनु खुसीको कुरा हो । बच्चाकै कारण घरमा खुसी छाउने गर्छ । त्यो खुसी दोब्बर तब हुन्छ, जतिबेला जब घरमा एउटा हैन, दुई-दुई वटा बच्चाको आगमन एकै पटक हुन्छ । त्यो पनि ‘जुम्ल्याहा’का रूपमा । तर जुम्ल्याहा बच्चा कसरी जन्मन्छ ? यसबारे धेरैमा चासो पाइन्छ ।
सामान्यतया गर्भधारणका क्रममा गर्भाशय वा पाठेघरमा एउटा गर्भ बस्छ । कहिलेकाहीँ पाठेघरमा एकभन्दा बढी गर्भ रहनसक्छ, जसलाई चिकित्सकीय भाषामा जुम्ल्याहा गर्भ भनिन्छ । जुम्ल्याहा गर्भमा गर्भदानी एउटै भए पनि गर्भ भने दुइटा रहनसक्छ । यस्तो गर्भ दुई किसिमको हुन्छ, मोनोजाइगोटिक र डाइजाइगोटिक ।
कैयौ मानिस एकै पटक दुईटा बच्चा जन्माउने चाहना राख्ने गर्छन् । उनीहरू भन्ने गर्छन्, ‘डाक्टर साब, पटक पटक बच्चा जन्माउनुभन्दा एकै पटक जन्माउन चाहन्छौं । त्यसैले, एकै पटक जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउने तरिका बताइदिनुस् ।’ जब कि कृत्रिम तरिकाले जुम्ल्याहा गर्भधारण गर्नु आफैमा जोखिमपूर्ण रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्राकृतिक तरिकाले दुईटा गर्भ रहन्छ भने त ठिकै छ, हैन भने कृत्रिम गर्भधारणा गर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या निम्तन्छन् ।